नि: शुल्क GED कक्षाहरू अनलाइन | GED® र HiSet® तयारी
निःशुल्क GED® अनलाइन कक्षाहरू
तपाईलाई GED® परीक्षणको लागि तयारी गर्न मद्दतको लागि नि:शुल्क अनलाइन कक्षाहरूको लागि आज साइन अप गर्नुहोस्. यी कक्षाहरू आत्म-गतिमा छन् र सबैलाई समेट्छन्4विषयहरू. तपाइँ तपाइँको कम्प्युटरबाट अध्ययन गर्न कुनै पनि समय साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ, वा HiSET™ परीक्षण, वा HiSET™ परीक्षण.
आफ्नो नि: शुल्क GED सुरु गर्नुहोस्® आज अनलाइन कक्षाहरू.
USAHello को GED® र HiSET® तयारी कक्षाहरूले तपाईंलाई परीक्षा पास गर्न तयार हुन मद्दत गर्नेछ. केवल एक इमेल ठेगाना संग साइन अप गर्नुहोस्. तपाईं आज सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ कुनै विज्ञापन र कुनै प्रतिबद्धता छैन. तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर बाट तपाइँको खाली समय मा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, ट्याब्लेट वा फोन. यो पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ.
USAHello तपाईलाई फस्टाउन मद्दत गर्नको लागि यहाँ एक गैर-नाफा संस्था हो.
GED बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ® र HiSET®?
मा जानकारी खोज्नुहोस् USAHello को वेबसाइट, लगायत परीक्षाको लागि कसरी दर्ता गर्ने. जब तपाईं परीक्षा पास गर्नुहुन्छ, तपाईं एक उच्च विद्यालय equivalency उपाधि प्राप्त हुनेछ. जो राज्य आधारमा तपाईं बस्ने, को उपाधि या त एक GED भनिन्छ गरिनेछ® वा HiSET® प्रमाण. तपाईंले अंग्रेजी वा स्पेनिस दुवै परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ. GED® फ्रान्सेलीमा पनि प्रस्तुत गरिन्छ.
हाम्रो कक्षाहरूले तपाईंलाई तयार गर्नेछ, तर तपाईले अझै पनि लिनु पर्छ GED® वा HiSET® आफ्नो डिप्लोमा प्राप्त गर्न आधिकारिक परीक्षण. यदि कुनै वेबसाइटले तपाईंलाई बताउँछ भने तिनीहरूले तपाईंलाई डिप्लोमा दिन सक्छन्, यो सत्य होइन. तिनीहरूलाई पैसा वा व्यक्तिगत जानकारी दिन छैन.
आफ्नो ज्ञान परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ?
USAHello ले नि: शुल्क GED पनि प्रदान गर्दछ® अभ्यास परीक्षण.
98.5% USAHello को 2021 GED सर्वेक्षण उत्तरदाताहरु उनीहरु भन्छन् सिफारिश यो वर्ग साथीलाई.
“पाठ्यक्रम वास्तविक GED सँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ त्यसैले अध्ययन गर्न USAHello को GED पाठ्यक्रम प्रयोग गर्दा मलाई धेरै मद्दत गर्‍यो र पास गर्न सजिलो भयो।” – एलिजेओना
“यो मेरो लागि भएको सबैभन्दा राम्रो कुरा थियो. यसले मलाई मेरो GED लिन र USAHello अध्ययन सामग्रीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको दुई महिना पछि पहिलो प्रयासमा पास गर्न आत्मविश्वास र निपुणता दियो।. तपाईको सेवाको लागि धन्यबाद!” – अबलाखे
छन्4नि: शुल्क GED® हाम्रो तयारी कार्यक्रममा अनलाइन कक्षाहरू, परीक्षामा प्रत्येक विषयको लागि एक:
भाषा कला, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, र गणित.
तल प्रत्येक वर्ग बारे जान्नुहोस्.
स्वागत GED गर्न® गणित कक्षा!
यो नि: शुल्क अनलाइन GED® गणित कक्षाले तपाईंलाई GED को लागि तयारी गर्न गणित सिक्न मद्दत गर्नेछ® वा HiSET® परीक्षण.
आफ्नो परीक्षण लिनुभएको र महत्वपूर्ण सोचाइ सीप विकास.
यो कक्षाले आधारभूत गणित सीपहरू र तपाइँलाई तपाइँको परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने विशिष्ट गणित ज्ञान सिकाउँछ. तपाईंले यस कक्षामा सिकेका सीपहरूले तपाईंलाई GED बुझ्न मद्दत गर्नेछ® र HiSET® गणित सामाग्री.
प्रत्येक पाठ को अन्त मा, तपाईं पूरा गर्न को लागि एक प्रतियोगिता हो. क्विजहरूले तपाईंलाई आफ्नो लागि अभ्यास गर्न मद्दत गर्नेछ GED® वा HiSET® परीक्षण. तपाईं पाठ मा सामाग्री बुझे यदि क्विजहरू पनि देखाउन.
यो वर्ग तपाईं प्रश्नहरू सबै प्रकारको तयारी हुनेछ. को क्विजहरू तपाईं वास्तविक परीक्षण मा आग्रह गरिने प्रश्न एउटै प्रकार सोध्न.
स्वागत GED® गणित वर्ग गर्न
कारक र एकाधिक
denominators र रूपान्तरण अंश प्रयोग
चर र समीकरण
जस्तै र सर्तहरू विपरीत
भिन्न गुणन गर्दाको र विभाजन
वर्गहरूको र जरा
घन, घन जरा र मात्रा
कार्य र ढलान
दर र एकाइ दर
अनुपात र अनुपात
बहु-चरण शब्द समस्या र समीकरण समीक्षा
अन्तिम अभ्यास प्रश्नोत्तरी 1
आफ्नो गणित परीक्षण र अन्तिम अभ्यास क्विज लागि तयारी
पोस्ट क्विज निष्कर्ष 1
बधाई - तपाईं GED® लिन तयार छन्, HiSet™ वा TASC गणित परीक्षण
स्वागत GED गर्न® सामाजिक अध्ययन वर्ग!
यो नि: शुल्क सामाजिक अध्ययन वर्ग तपाईं सिक्न र GED लागि अध्ययन गर्न मद्दत गर्नेछ® वा HiSET® सामाजिक अध्ययन परीक्षण.
इतिहास, भूगोल, civics, सरकार र अर्थशास्त्र
सामाजिक अध्ययन GED® र HiSET® परीक्षण इतिहास को आफ्नो समझ मापन, अर्थशास्त्र, र संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वको भूगोल. हाम्रो पाठ ती विषयहरू बारेमा सिकाउन हुनेछ. पाठ पनि परीक्षण प्रश्नहरूको जवाफ लागि सुझाव दिन.
यी पाठ प्रत्येक को अन्त मा, त्यहाँ एक क्विज छ. को क्विजहरू तपाईं आफ्नो GED लागि अभ्यास गर्न मद्दत गर्नेछ® वा HiSET® परीक्षण. तिनीहरूले प्रश्नहरूको एउटै प्रकार तपाईं वास्तविक परीक्षण मा आग्रह गरिने सोध्न.
तपाईंले चाहे धेरै पटक रूपमा क्विजहरू लाग्न सक्छ. तपाईं कुनै पनि समयमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पाठ छोडेर फरक दिन मा फिर्ता लग इन गर्न.
तपाईं आफ्नो शिक्षा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ!
नीलो बटनमा क्लिक गरेर कक्षा अब सुरु.
GED® सामाजिक अध्ययन वर्गमा स्वागत छ
अमेरिका को प्रारम्भिक इतिहास
को प्रगतिशील युग र विश्व युद्ध 1
महान् अवसाद र विश्व युद्ध 2
को नागरिक अधिकार आन्दोलन
शीत युद्ध र आधुनिक विश्व
मान्छे र वातावरण
शास्त्र र सरकार 1
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार
शास्त्र र सरकार 2
शास्त्र र सरकार 3
शास्त्र र सरकार 4
राजनीतिक दल र सार्वजनिक नीति
क्रान्तिहरू जसले अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो
आफ्नो सामाजिक अध्ययन परीक्षण र अन्तिम अभ्यास क्विज लागि तयारी
बधाई - तपाईं GED® लिन तयार छन्, HiSet™ वा TASC सामाजिक अध्ययन परीक्षण
स्वागत GED गर्न® भाषा कला वर्ग!
यो नि: शुल्क अनलाइन GED® भाषा कला कक्षाले तपाईंलाई GED पास गर्न मद्दत गर्नेछ® वा HiSET® भाषा कला खण्ड.
भाषा कला परीक्षण उपाय तपाईं कसरी राम्रो पढ्न र तपाईं आफ्नो विचार कसरी राम्रो व्याख्या गर्न सक्छन् कुरा बुझ्न.
पढाइ, व्याकरण र लेखन
यो भाषा कला वर्ग तीन खण्डहरू छ: पढाइ, व्याकरण, र लेखन. सबै तीन वर्गहरु GED छन्® र HiSET® परीक्षण.
प्रत्येक पाठ को अन्त मा, त्यहाँ एक क्विज छ. को क्विजहरू तपाईं आफ्नो GED लागि अभ्यास गर्न मद्दत गर्नेछ® वा HiSET® परीक्षण. तपाईं पाठ मा सामाग्री बुझे भने तिनीहरूले पनि देखाउन.
को निबंध प्रश्नहरूको लागि, कुनै गलत वा सही जवाफ हो. हामी तपाईंलाई सिकाउन कसरी यी प्रश्नहरूको जवाफ.
तपाईं गलत जवाफ को एक धेरै भने कृपया चिन्ता छैन. तपाईं जस्तै धेरै पटक रूपमा क्विजहरू लिन. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अभ्यास राख्न छ!
हामी यहाँ तपाईं प्रश्न छ भने तपाईंलाई मदत गर्न हो.
स्वागत GED® भाषा कला वर्ग गर्न
शब्द संग्रह प्रश्नहरू
विषयवस्तुहरू र मुख्य विचारहरू पहिचान
पाठ को पार्ट्स
राय व्यक्त र प्रभावित
वाक्य रन-on र टुकडे परहेज
लेख्न तयार रही
एक निबंध को भागहरु लेखन
संक्रमण शब्द र वाक्यांश प्रयोग
दृश्य को तुलना अंक
आफ्नो भाषा कला परीक्षण र अन्तिम अभ्यास क्विज लागि तयारी
बधाई - तपाईं GED® लिन तयार छन्, HiSet™ वा TASC भाषा कला परीक्षण
स्वागत GED गर्न® विज्ञान कक्षा!
यो नि: शुल्क GED® विज्ञान कक्षाले तपाईंलाई विज्ञान र वैज्ञानिक अनुसन्धान भनेको बुझ्न मद्दत गर्नेछ. कक्षा भौतिकी तपाईं परिचय हुनेछ, जीव, रसायनशास्त्र, पृथ्वी विज्ञान र बाह्य अन्तरिक्ष.
तपाईं सबै कुरा सम्झना गर्न आवश्यक छैन, तर यसले तपाइँलाई तपाइँको परीक्षणमा यी वैज्ञानिक विषयहरूसँग परिचित हुन मद्दत गर्नेछ.
परीक्षण प्रश्न सबैभन्दा एक वैज्ञानिक पाठ पढ्न र प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं माग्छ. हामी तपाईंलाई तयार गर्न चाहनुहुन्छ. प्रत्येक पाठ को अन्त मा, त्यहाँ एक क्विज छ. यो प्रतियोगिता प्रश्न को GED समान छन्® र HiSET® परीक्षण प्रश्नहरू.
तपाईं जस्तै धेरै पटक रूपमा क्विजहरू लिन. अभ्यास राख्न, जब तपाईं समय.
विज्ञान धेरै लामो र असामान्य शब्द प्रयोग. धेरै देशी अंग्रेजी बोल्नेहरूलाई पनि यी शब्दहरू थाहा छैन. प्रत्येक पाठ को अन्त मा, त्यहाँ एक शब्दावली समीक्षा छ.
स्वागत GED® विज्ञान वर्ग गर्न
डीएनए, जीन, र बंशाणु
सौर प्रणालीमा धरती
परमाणु र अणुको
परिवर्तन र प्रतिक्रिया
प्रतीक र रासायनिक समीकरण
गति र सेना
ऊर्जा र काम
Units र सूत्रहरू
तपाईंको विज्ञान परीक्षण र अन्तिम अभ्यास क्विज लागि तयारी
बधाई छ - तपाईं GED® लिन तयार छन्, HiSet™ वा TASC विज्ञान परीक्षण